के यसकारण बलिउडमा आउन डराउँछन् दक्षिण भारतीय स्टार? – Khabar Silo
‘बाहुबली’ सिनेमाले बलिउड र दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योगबीच रहँदै आएको दुरीलाई धेरै कम गर्‍यो।’बाहुबली’पछि दक्षिण भारतीय सिनेमाको लोकप्रियता हिन्दी सिनेमाको दब्दबा रहेको उत्तर भारतमा बढेको छ।बलिउडका स्टारहरू पनि दक्षिण भारतीय सिनेमामा लगातार काम गरिरहेका छन्।
पछिल्लो केहि वर्ष यता यो क्रम बाक्लिएको छ। अजय देवगन, आलिया भट्ट, विद्या वालन, अमिताभ बच्चन, विवेक ओवरोय, अक्षय कुमार जस्ता ठूला नाम यस सूचिमा सामेल भइसकेकाछन्।हालै ‘साहो’बाट बाहुबली फेम प्रभासले बलिउडमा डेब्यू गरे। उनको डेब्यू वक्सअफिसमा सुखद सावित भइरहेको छ। सिनेमाले बलिउडको मानक सय करोडको आँकडा रिलिजको सातामा ने पार गर्‍यो। हाल दोश्रो हप्तामा चलिरहेको सिनेमाले राम्रै पैसा कमाइ गरिरहेको छ।दक्षिण भारतीय सिनेमाका प्रशंसकहरू आफ्ना प्रिय दक्षिण भारतीय स्टारहरू पनि बलिउड आउन भन्ने चाहन्छन्।प्रशंसकमा यस्तो कामना भएपनि परिस्थितिले भने दक्षिणका ठूला स्टारहरू बलिउडमा काम गर्ने हिच्किचाउने गरेको देखाएको छ।
महेश बाबु, विजय देवकोडां, अल्लु अर्जुन, विक्रम, यश, राम चरण, अजिथ जस्ता स्टारहरूका प्रशंसक दक्षिण भारतमा मात्र सिमित छैनन्, भारतभर छन्। उनीहरू अभिनित सिनेमाका हिन्दी डब संस्करणले उत्तर भारतमा राम्रो दर्शक बटुल्ने गरेको छ।तर यति हुँदाहुँदै पनि बलिउडका सिनेमामा उनीहरू किन देखिदैंनन्? यो प्रश्न धेरैमा छ। थुप्रै बलिउड सिनेमा निर्माता-निर्देशकले प्रस्ताव गर्दा पनि उनीहरू सिनेमामा काम गर्न हिच्किचाउने गर्छन्।
यसको जवाफ हालै रिलिज भएको ‘साहो’मा देखिन्छ।क्षेत्रिय कलाकारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भाषा रहेको छ। रजनीकान्त, कमल हसन जस्ता स्टारहरू हिन्दी भाषामा पोख्त छन् तर अन्य कलाकारलाई भाषिक कठिनाइ हुने गरेको छ।’साहो’को हिन्दी डब प्रभास स्वयंले गरेका छन् । उनको कमजोरी सिनेमाको हिन्दी संवादमा स्पष्ट महशूस हुन्छ। यसका लागि उनलाई हालै ट्रोलको सिकारसमेत बनाइयो।
दोश्रो कारण स्टारडम र प्रभाव हो। आफ्नो भाषाको सिनेमामा स्टारडमको मजा लिइरहेका उनीहरूलाई अर्को भाषाको सिनेमामा पनि जम्नु सजिलो हुँदैन। सफल भए त राम्रो हो तर असफल हुँदा त्यसको घाटा उनीहरूको भाषाको सिनेमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ।यस्तोमा उनीहरू हिच्किचाउने भए नै। भाषाका अलावा सिनेमा छनौटमा पनि उनीहरूका लागि चुनौति हो।
हात बि नै टिकटकमा नाच्ने कोमलको दुनियाँ रु वाउने कहानी,भन्छिन् धेरै पटक म रेर बाँचेकी छु (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on September 29, 2021 Author khabar silo
कैलाली धनगढीकि कोमल अहिले उमेरले २४ वर्ष पुगेकि छिन् ।उनी कैलालीबाट काठमाडौ आएको लगभग ५ वर्ष भयो ।आफ्नो पढाईसंगै मोडल बन्न भनेर उनी राजधानी छिरेकी थिइन् ।ब्याचलर दोस्रो वर्षमा पढिरहेकी उनी आफुले मोडलिङमा राम्रो अवसर नपाएको बताउछिन् । तर अहिले सामाजिक संजाल टिकटकमा भने उनको निकै चर्चा छ ।कोमल उनको नाच र अभिनयले गर्दा अहिले […]
यसकारण राेकियाे सलमान खान क्यानडा र अमेरिका जाने कार्यक्रम